Nabad-doon lagu rasaaseeyay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Nabad-doon lagu rasaaseeyay Muqdisho
Imaamka beesha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf ayey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku rasaaseeyeen magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Imaam Maxamed Yuusuf oo ah Imaamka beesha Mudulood oo safar kaga yimid degmada Guriceel halkaas oo uu kaga qeyb galayay Tacsida AUN Marxuum Janaraal Maxamed Nuur Galaal oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Asluubta Soomaaliyeed ayaa rasaaseeyay gaari uu saarnaa Nabad-doonka xilli uu marayay meel u dhaw Maxkamadda Gobolka Banaadir. Dad ka dhawaa goobta uu falku ka dhacay ayaa waxaa ay arkayeen in gaari kasoo gudbay Koontoroolka koowaad islamarkaana koontaroolkii labaad rasaas oodda looga qaaday.
Waxaa lasoo sheegayaa in halkaasi uu ka dhashay khasaaro dhaawac ah oo soo garay askarta ilaalada u aheyd Imaamka & Nabad-doono kale oo la socday.
Imaam Maxamed Yuusuf, Imaamka beesha mudulood ayaa ka badbaaday qarax miino oo loo dhigay waddada Beexaani 23 -kii Janaayo ee sanadkan, waxaana maanta uu ka badbaaday rasaas ay ku fureen ciidamo ku sugnaa agagaarka maxkamadda Gobolka Benaadir.
Falkan la xiriira gaariga la rasaaseeyay ee Nabad-doonka ayaa kusoo aadaya xilli maanta galinkii hore uu ka dhacay fal ismiidaamin ah meel udhaw koontaroolka Madaxtooyada gaar ahaan Sayidka. Laamaha ammaanka kama aysan hadlin falkan ka dhacay maxkamadda Gobolka Benaadir.